जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको रिपोर्ट, बिरामी घर फर्केपछि मात्रै आउँछ – Everest Dainik – News from Nepal
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको रिपोर्ट, बिरामी घर फर्केपछि मात्रै आउँछ
काठमाडौं, भदौ १८ । अस्पतालबाट बिरामी निको भई घर पुगेपछि मात्रै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको रिपोर्ट चिकित्सकको हातमा पुग्ने गरेको छ । समयमा रिपोर्ट नआए पनि धेरैजसो बिरामी निको भएर घर फर्कने गरेका छन् । बिरामीले आफूलाई लागेको रोगबारे जानकारीसमेत पाउँदैनन् ।
कतिपय बिरामी रिपोर्टपछि त्रसित बन्ने गरेको सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका डा. शेरबहादुर पुनले बताए । ‘हामीले अनुभवका आधारमा बिरामीलाई औषधि चलाएका हुन्छौँ,’ पुनले भने, ‘बिरामी निको भएर घर जान्छन्, पछि रिपोर्टमा स्वाइनफ्लु, स्क्रब टाइफस पोजेटिभ देखिन्छ । फ्लोअपमा आउँदा रोग थाहा पाउँछन्, कतिपय अस्पतालमै बेहोस हुन्छन् ।’
नमुना परीक्षण गराउने बिरामीको संख्या सोचेभन्दा बढी भएकाले रिपोर्टमा ढिलाइ भएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ । अहिले निजी र सरकारी सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि नमुना आउने गरेका छन् । ‘त्यसैले हामीले समयमा रिपोर्ट दिन नसकेका हौँ । भएका उपकरण प्रयोगमा ल्याएर भरपुर सेवा दिएका छौँ,’ प्रयोगशालका उपमहानिर्देशक विष्णु उपाध्यायले भने । हाल स्क्रब टाइफस, मौसमी इन्फ्लुएन्जाका बिरामी बढी देखिएकाले देशभरिका नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला केन्द्रित भएका छन् ।
रिपोर्ट नहेरी औषधि चलाइन्छ
सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा दैनिक ५० जना रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखालाका बिरामी आउने गरेका छन् । सरुवारोग विशेषज्ञ डा. पुनले धेरैजसो बिरामीको नमुना परीक्षण गर्ने गरेको बताए । ‘बिरामीको लक्षणका आधारमा भर्ना गराएर उपचार सुरु गर्छौँ, अनुभवका आधारमा औषधि चलाउँछौँ,’ उनले भने, ‘बिरामी पूर्णरूपमा ठीक भएर घर पुगेपछि स्वाइनफ्लु पोजेटिभ वा स्क्रब टाइफस पोजेटिभ रिपोर्ट आउँछ ।’
उनले केही समय अनुमानमा औषधि चलाउन सकिए पनि कहिलेकाहीँ रिपोर्टमा अरू नै रोग देखिएको अवस्थामा गम्भीर समस्या निम्तिन सक्ने बताए । ५० बिरामीमध्ये ४३ जनाको रिपोर्ट निको भएर घर गएपछि आउने गरेको पुनको भनाइ छ । ‘सुरुका दिनमा रिपोर्ट आउन एक साता लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले तीनदेखि चार दिनमा रिपोर्ट आउँछ । तर, धेरै बिरामी निको भएर गइसकेका हुन्छन् । बिरामी स्वयंलाई के रोग लागेको थियो भन्ने पनि जानकारी हँुदैन ।’
महत्वपूर्ण रिपोर्ट दिन तोकेर
निर्देशक, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले भन्दा चाँडो रिपोर्ट दिएका छौँ । तर, महत्वपूर्ण रिपोर्टका लागि हामीले दिन तोकेर दिने गरेकाले रिपोर्टमा समय लागेको हो । जनशक्ति र कम उपकरणले पनि काम गर्न केही समस्या परेको छ । एउटा नमुना परीक्षण गर्दा खर्च धेरै आउने भएकाले महत्वपूर्ण नमुना संकलन गरेर सातामा दुुईपटक परीक्षण गर्छौँ । हप्ताभरि नमुना संकलन गरी बिहीबार र शुक्रबार परीक्षण गरेकाले ढिलाइ भएको हो ।
यसरी गरिन्छ परीक्षण
इन्फ्लुएन्जा वा कुनै पनि रोगको परीक्षण गर्दा पहिले गुण पत्ता लगाउनुपर्छ । ‘ए’ वा ‘बी’ के हो भनेर छुट्याउनुपर्छ । आएका नमुना गुणस्तर संकलन भए नभएको बारे परीक्षण गरिन्छ । गुणस्तर नमुना संकलन भएको हो भन्ने प्रमाणित भएपछि इन्फ्लुएन्जा ‘ए’ र ‘बी’ मेसिनमा हालिन्छ । त्यसमा इन्फ्लुएन्जा कुनै एउटा देखिएमा त्यसको प्रजाति पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी सबै उपकरण जुटाएर परीक्षण गर्दा पाँच घन्टा समय लाग्न जान्छ । बिहानैदेखि काम गरेको खण्डमा दिनमा दुई लट परीक्षण गर्न सकिन्छ । एक लटमा ७० वटा नमुना परीक्षण गरिन्छ । त्यसलाई हेर्दा बढीमा एक दिनमा एक सय ५० नमुना परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला केन्द्रित
डा. विष्णु उपाध्याय
उपनिर्देशक, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला
अहिले विभिन्न प्रकारका रोगको प्रकोप देखापरेकाले प्रयोगशालामा नमुना परीक्षणका लागि आउने हुँदा बिरामीको चाप अत्यधिक बढेको छ । हामीसँग तीनवटा उपकरण सञ्चालनमा छन् । ती उपकरणलाई बिहानदेखि राति अबेरसम्म निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउँदा पनि बिरामीको चापलाई कम गराउन सक्ने अवस्था हामीसँग छैन । परीक्षणका लागि आएका नमुना धेरै हुँदा चार दिनसम्म रिपोर्ट आउन समय लाग्छ । -नयाँ पत्रिकाबाट